Izindaba - China Europe International Trade Digital Exhibition Ibanjelwe eBeijing
I-China Europe International Trade Digital Exhibition, ebisekelwa yiChina CCPIT, China Chamber of International Commerce kanye neChina Service Trade Association ngokuhlanganyela, ibibanjelwe eBeijing ngo-Okthoba 28 nonyaka.
Lo mbukiso ungowokugubha unyaka wama-45 wobudlelwano bamazwe ase-Sino-European, ukukhuthaza ubudlelwano phakathi kwe-China ne-Europe, ukubhekana nenselelo evela ku-COVID-2019 nokukhulisa izilinganiso ezisebenzayo ekubambisaneni kwekhwalithi ephezulu kanye nasekuthuthukiseni Umnotho we-Sino-Europe kanye nebhizinisi . Lo mbukiso uqhubeke cishe izinsuku eziyi-10, kuhloswe ngawo ukusungula inkundla yezokuxhumana yamabhizinisi aseChina nawaseYurophu ngeplatifomu i- “Trade Promotion Cloud Exhibition” evela kwiCCPIT Digital Exhibition Service Platform, engasiza amabhizinisi ukuthola amathuba okubambisana nokwandisa izimakethe zomhlaba wonke.
Njengamanje, umnotho womhlaba uhlupheka ngokubambisana nokuvikelwa kanye nokukhuphuka kwe-unilateralism. Kusukela kulo nyaka, ethonywe yi-COVID-2019, kwenzeke ukwehla komnotho emhlabeni kanye nokwehla okukhulu kokuhwebelana kwamazwe omhlaba kanye nokutshalwa kwezimali. Ukuphikelela kuphela ebunyeni nasekusebenzisaneni, ngakho-ke singabambisana ngokubambisana nenselelo yezinhlekelele zomhlaba wonke futhi sibone ukuchuma nokuthuthuka okuvamile. I-China CCPIT izoqhubeka nokusebenzisana neqembu ngalinye ukudala ipulatifomu engcono yokutshalwa kwezimali kwezamabhizinisi eSino-Europe, ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono nokusebenziseka kalula.
Kunamabhizinisi angaphezu kuka-1,200 aqhamuka ezifundazweni ezingama-25 njengeLiaoning Province, Isifundazwe saseHebei, iShanxi Province njll. Abamba iqhaza kulo mbukiso. Ikhathalogu yomkhiqizo ihlanganisa izinsimbi zokwelapha, izinto zokwakha kanye nehadiwe, izinto ezisehhovisi, ifenisha, izipho, ukusetshenziswa kwezinto zikagesi, izinto zasendlini, izindwangu nezingubo, ukudla njll, kanye nensimu yensizakalo enjengemboni entsha, insizakalo yezobuchwepheshe njll, ukusetha ngokukhethekile 'Indawo Yokukhombisa Izinto Eziwubhubhane'. Bangaphezu kuka-12 000 abathengi abavela emazweni angaphezu kwama-40 aseYurophu anjengeNorway, iSweden, iNetherlands njll.